Nylon Bonded Threads, Nylon Nylon Thread for Thread
Mashruuca Nylon Thread
Nylon bond tolida wuxuu ka samaysan yahay polyamide 6.6 fiber synthetic, magac caan ah Nylon 6.6 ama 6 synthetic fiber, iyada oo loo marayo geedi socod gaar ah oo la isku xidho marka la maroojinayo fiberka, ka dibna dhejisida iyo dhammeystirka dhammaan fiber-ka sida isku midka ah, inta tolidda, xargaha daminku aanu faafin , ma cusbo, iska caabin sare oo baabi'inta.
Muujinta alaabada: Tenacity aad u fiican, UV fiican iyo ilaalin qarin, cimri dherer, Hanti biyo celin sare leh, Jaan gooyo adag ayaa laga hortagay, xoojinta tolka aad u fiican & muuqaal wanaagsan, Range midab aad u balaaran
Saamaynta tolku waa mid aad u yaab badan, faa iidada ay ka leedahay sheyga nylon iyo saamaynta saliida leh, Lagu dabaqi karo dhammaan noocyada alaabada maqaarka, boorsada & shandadaha, qalabka gawaarida, alaabada banaanka, iwm.
100D / 3, 150D / 2, 150D / 3, Inta badan waxaa loo isticmaalaa alaabta maqaarka khafiifka ah: sida boorsooyinka, daahyada, boorsooyinka gacanta, roobaadka, dharka maqaarka, galoofyada maqaarka, iwm.
210D / 2, 210D / 3, 250D / 3, Sida caadiga ah loo isticmaalo badeecadaha maqaarka iyo maqaarka: sida kabaha maqaarka, bacaha maqaarka, boorsooyinka, dharka maqaarka
Dhar jilicsan: floss ilkaha, kabaha safarka, boorsooyinka safarka, teendhooyinka, sofas dharka, gogosha, sofas, iwm.
300D / 3, 420D / 3, 630D / 3, Inta badan waxaa loo isticmaalaa alaabada maqaarka qaro weyn leh: sofas, barkimooyinka gawaarida, kabaha isboortiga, suumanka, iwm.
Alaabada dharka adag: shiraaca, buugga koontada, teendhooyinka, boorsada boorsada, iwm. Alaabada gacmaha lagu tolo, qaniinyada, daahyada gogosha.
840D / 3, 1260D / 3, Inta badan waxaa loo adeegsadaa qaniinyada waaweyn, alaabta gacmaha lagu tolo, bacaha baakadaha lagu xareeyo, iwm.
250D / 3 100% Bondka Birta Xidhmada